Gbalịa a prism ọzọ ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ
Apụghị tọghata ma ọ bụ mpikota onu vidiyo na prism Video Ntụgharị? Ebe i nwere ike na-agbalị a prism ọzọ ka mfe dozie nsogbu gị. Nke a ọzọ ka prism atọghata videos na 30X kasị akakabarede ọsọ na tọghata vidiyo na ZERO àgwà ọnwụ.
Get a ọkachamara na vasatail prism ọzọ mee ka gị na video akakabarede.
Nkwado tọghatara 150+ videos, gụnyere nkịtị, 3D na HD videos.
Mpikota onu videos na-esi gị video nta ma na otu elu mma.
Tọghata vidiyo na ekwentị mkpanaaka, mbadamba, iMovie, Final Cut Pro na ndị ọzọ.
Mee ka a ọrụ DVD site na-ere ọkụ video ka DVD na menu ndebiri.
Hazie gị video site na ike video edezi atụmatụ.
# 1 Olee otú iji prism Alternative
# 2 Ọzọ nhọrọ: 100% Free prism Alternative
# 3 Video Converter Ultimate VS Free prism Alternative
# 1: Olee otú Jiri prism Alternative
Nzọụkwụ 1. Tinye videos n'ime nke a prism Alternative
Ị pụrụ nanị pịa "Tinye Files" bọtịnụ na interface, ma ọ bụ ikpuru na dobe gị videos n'ime ya. Ya ogbe akakabarede ọrụ na-ahapụ mbubata ọtụtụ faịlụ na tọghata faịlụ n'otu oge.
Dezie video: Kpaa, akuku, tinye mmetụta gị video site na ịpị "Dezie" bọtịnụ na dị videos.
Nzọụkwụ 2. Set video mmepụta
Ị nwere ike ịtọ mmepụta format dị ka video (gụnyere HD & 3D), audio, web, ma ọ bụ Android na Apple ntị, Xbox ma ọ bụ PSP. Dị pịa mmepụta Format, na mgbe ahụ họrọ karị n'okpuru "Format" na "Ngwaọrụ" edemede.
Nzọụkwụ 3. Ọkụ DVD (Nhọrọ)
Pịa "Ọkụ" taabụ ịbanye DVD-ere ọkụ interface, na mgbe ahụ mbubata gị video faịlụ n'ime ya, wee tinye ọkacha mmasị gị menu ndebiri gị DVD ọrụ site na ịpị "Change Template" button. N'ikpeazụ, ị nwere ike pịa apa ọkụ bọtịnụ.
Nzọụkwụ 4. tọghata video
A nzọụkwụ, i nwere ike dị see "tọghata" button na-amalite iji tọghata videos. Nke a ọzọ ka prism atọghata videos na 30X kasị akakabarede ọsọ. Adịghị anya ị ga-esi na gị converted videos.
# 2: More nhọrọ: Free prism Alternative
Get a zuru ezu FREE prism ọzọ
Free tọghata ọ bụla video faịlụ na ngwa ngwa ọsọ.
Wepụ music si na fim.
Play gị talent dezie video dị ka ọchịchọ gị.
Download YouTube vidiyo na 2 ụzọ.
Free prism Alternative Download Download
naanị nkịtị video nkịtị video, HD video, 3D video
Tọghata iTunes ugwo Video
Kachasị atọrọ atọ
YouTube naanị na-akwado ihe ọ bụla na-ewu ewu video nkekọrịta saịtị download
30X Fast Nchigharị Speed
Naanị 10 conversions dịghị mmachi
iVI-adịghị arụ ọrụ? Enweta ihe Alternative.
PLEX Metadata Nsogbu? Enweta ihe Alternative.
iVI-adịghị arụ ọrụ? Kpebiworo
> Resource> Alternatives> prism Video Ntụgharị-adịghị arụ ọrụ? Gbalịa Ya Alternative ugbu a